ထူးဆန်းတဲ့အစားအသောက်တွဲစပ်မှုများ In:Kawi Eats, Weird Food
ကဲ ကဲ ဒီနေ့ challenge လေးတစ်ခုလုပ်ကြမယ်။ Challenge နာမည်ကတော့ Weird Food Combination Challenge တဲ့။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ list လေးတွေထဲက ကိုယ်စားနိုင်သလောက်စားကြည့်ကြမယ်လေ။ အများဆုံးစားနိုင်တဲ့သူက အနိုင်ပေါ့။ ကဲ ဒါဆို … စပြီနော်!! ၁) M&M နဲ့ ပီဇာ အသားတွေ၊ ပင်လယ်စာတွေနဲ့ ချိစ်တွေ နိုင်နိုင်ထည့်လုပ်ထားတဲ့ ပီဇာပေါ်မှာ M&M ချောကလက်လုံးလေးတွေတင်စားကြည့်ပါ။ ချောကလက်အလုံးလေးတွေကပဲ ပီဇာရဲ့အအီဓာတ်ကိုဖျောက်ပေးနိုင်မလား။ ချောကလက်ကြောင့်ပဲ ပီဇာအရသာပျက်သွားမလား ဆိုတာကတော့… …………………………………………………………………………………………………. ၂) Ketchup နဲ့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်တွေကို ရုပ်ရှင်ရုံမှာလည်းအလွယ်တကူရနိုင်သလို၊ မဖောက်ရသေးတဲ့ ပြောင်းဖူးတွေဆို City Mart မှာ အလွယ်ဝယ်နိုင်တယ်နော်။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ချိုချိုလေးအပေါ်မှာ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ Ketchup အချဉ်ရည်နဲ့တွဲစားကြည့်ပါ။ ဒီအတွဲလေးကတော့ လိုက်လောက်မယ်ထင်တာပဲနော်။ 🙄🙄🙄 ……………………………………………………………………………………………….. ၃) ဟမ်ဘာဂါနဲ့ peanut butter ဟမ်ဘာဂါထဲမှာ ဆော့စ်တွေ၊ mayonnaise တွေအစား အရမ်းအီပြီး၊ စားလိုက်ရင် အာခေါင်မှာကပ်တတ်တဲ့ peanut butter စမ်းစားကြည့်ပါ။ ဟမ်ဘာဂါထဲက အသားရဲ့အရသာကို peanut butter ကဖုံးသွားမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်သွားပြီး စားလို့ကောင်းသွားမှာလား စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၄) အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ ပျားရည် အာလူးတွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာပဲအချောင်းလေးတွေလှီးပြီးကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ fast food ဆိုင်တွေမှာဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ပြီး City Mart မှာ အလွယ်တကူဝယ်နိုင်တဲ့ ပျားရည်လေးနဲ့ တို့စားကြည့်ပါ။ ဒါလေးကတော့ ထင်သလောက်မဆိုးလောက်ပါဘူး။ 🤔🤔🤔 အချိုကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ဒီအတွဲအစပ်လေးကိုကြိုက်လောက်မှာပါ။ ……………………………………………………………………………………………….. ၅) Vanilla ရေခဲမုန့်နဲ့ soy sauce ဒါကတော့ နည်းနည်းလန့်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ 😳😳😳 ချိုချိုမွှေးမွှေးရေခဲမုန့်အပေါ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး soy sauce တဲ့။ 😵😵😵 ဒါပေမယ့် ဒီအရသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်သွားတဲ့ အရသာကို ကြိုက်မသွားဘူးလို့လည်း ပြောလို့မရဘူးလေနော်။ ………………………………………………………………………………………………. ၆) ငှက်ပျောသီးနဲ့ သုံးထပ်သားလွှာ အဆီတရွှဲရွှဲ သုံးထပ်သားလွှာနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်လှတဲ့ ငှက်ပျော်သီးနဲ့တွဲစားကြည့်ကြမယ်။ City Mart တွေမှာ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ သုံးထပ်သားလွှာတွေကိုကြော်ပြီး ငှက်ပျော်သီးကို အတုံးလေးတွေလှီးလိုက်ပါ။ ငှက်ပျော်သီးအတုံးလေးတွေအပေါ်ကို သုံးထပ်သားလွှာပတ်ပြီး စားလိုက်ပါ။ အရသာလေးက ဘာဖြစ်မလဲ??? ……………………………………………………………………………………………….. ၇) ငါးပိချက်နဲ့ ပေါင်မုန့် ဒီတွဲစပ်မှုမှာတော့ ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ငါးပိချက်ကို ပေါင်မုန့်အိအိလေးတွေထဲ ညှပ်ပြီးတွဲစားကြည့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးပိချက်အရသာရဲ့ ချိုချိုငံငံလေးကို ပေါင်မုန့်ထဲညှပ်ပြီးတွဲစားတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုမျိုးအရသာတွေကိုခံစားရမလဲ ဆိုတာကတော့ စားကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေပဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ………………………………………………………………………………………………… ၈) ခေါက်ဆွဲခြောက်နဲ့ နို့ဆီ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေကို ပြုတ်မစားဘဲ ဒီအတိုင်းလေးခြေပြီး အမှုန့်နဲ့နှံ့အောင်မွှေပြီးတော့စားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီခေါက်ဆွဲခြောက်တွေကို နို့ဆီနဲ့တွဲပြီးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုအရသာတွေကို ခံစားရမလဲ? ဒီလိုတွဲစပ်မှုမျိုးကို စမ်းစားကြည့်ကြဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ………………………………………………………………………………………………. ၉) Potato chipsနဲ့ စတော်ဘယ်ရီယို နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ Potato chips တွေနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ စတော်ဘယ်ရီယို၊ ဒီနှစ်မျိုးကို တွဲစားကြည့်ဖူးပါသလား? Potato chips တွေရဲ့ ကြွပ်ရွပြီး ငံကျိကျိအရသာကို စတော်ဘယ်ရီယိုချိုချိုလေးတွေနဲ့ တွဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအရသာမျိုးကိုခံစားရမလဲဆိုတာသိဖို့ စမ်းစားကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ …………………………………………………………………………………………….. ၁၀) Oreoနဲ့ Mayonnaise Oreo လိုမျိုးလူတော်တော်များများ ကြိုက်ကြတဲ့မုန့်မျိုးကို ပုံမှန်အားဖြင့် နွားနို့၊ ချောကလက်နို့ တို့နဲ့ပဲတွဲစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီOreo ကို Mayonnaise လိုမျိုး dressing နဲ့တွဲပြီးစားကြည့်ကြဖို့တော့ ဘယ်သူမှစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလဲ? ဒီတွဲစပ်မှုကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ မထင်မိဘူးလား? မုန့်တွေအကုန်စားကြည့်ပြီးလို့ လျှာကြီးထူနေပြီလား?? 🤣🤣🤣 လူတိုင်းမှာ အကြိုက်ကိုယ်စီရှိကြတာဆိုတော့ တချို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရသာတွေကို ကြိုက်တဲ့လူတွေက ကြိုက်ကြပြီး မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်ဟာတွေကိုကြိုက်ပြီး ကိုယ်လုံးဝစားလို့မရတဲ့ဟာတွေကို ဘယ်သူတွေကကြိုက်ကြလဲဆိုတာ သိရအောင် အောက်မှာ comment ပေးခဲ့ကြနော်။ ကိုယ်က အကုန်စားပြီးပြီဆိုရင် foodie ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို challenge ခေါ်လို့ရတယ်နော်!!! ...
ငှက်ပျောသီးထက် ငှက်ပျောသီးအခွံကို စားရမှာလား? In:Kawi Eats, Weird Food
ငှက်ပျောသီးဆိုတာ လူတွေနဲ့လုံးဝမစိမ်းတဲ့ အသီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပြီး စျေးကလည်း အခြားအသီးတွေလို စျေးမကြီးတာကြောင့် တော်တော်များများစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးစရာတစ်ခုရှိတာက ငှက်ပျောသီးအခွံကိုရော ဘာလုပ်လိုက်ပါသလဲ? ငှက်ပျောသီးအခွံ တော်တော်များများက အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ဇာတ်သိမ်းသွားကြတာ များပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်တက်နင်းပြီး ချော်လဲပြီးမှ အမှိုက်ပုံးထဲရောက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေမသိကြတာက ငှက်ပျောသီးအခွံက ငှက်ပျောသီးထက်တောင် အကျိုးရှိသေးလို့ပြောထားပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာ Vitamin C၊ Vitamin B6၊ Potassium စတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံမှာ ပါဝင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဒီထက်တောင်ပိုများပါသေးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ဆဲလ်တွေရဲ့ကြီးထွားမှုတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ တစ်သျှူးတွေနဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ ငှက်ပျောသီး အခွံတွေကိုမလွှင့်ပစ်တာကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံကို ကြော်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ပြုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် စားသောက်လို့ရပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံတွေကို လွှင့်ပစ်ခြင်းကသာ သဘာဝပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေရသလိုဖြစ်နေတာပါတဲ့။ ကဲကဲ… ဒါဆို ငှက်ပျောသီးကို မစားတော့ဘဲ ငှက်ပျောသီးအခွံကိုပဲ စားကြတော့ရင်ကောင်းမလား?? နောက်တာနော်… ဟီး ...
အလွန်ကြီးမားလာတဲ့ အစားအသောက်အတု စျေးကွက် In:Kawi Eats, Weird Food
စားစရာအတုဆိုလို့ ကိုယ်တွေစားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ အတုတွေပါနေပြီလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်မသွားပါနဲ့။ အခုပြောမယ့် စားစရာအတုတွေဆိုတာက ကိုယ်တွေစားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာပါလာမယ့် အတုတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများအသုံးပြုလာကြတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေရှေ့မှာ အခုနောက်ပိုင်း ခင်းကျင်းပြသထားလေ့ရှိတဲ့ အစားအစာအတုတွေပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုခင်းကျင်းပြသထားတာကိုတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက တချို့ဆိုင်တွေမှာလည်း ခင်းကျင်းပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဟာတွေက အတုတွေဆိုတော့ စားလို့မရတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပလတ်စတစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာမို့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီစားစရာအတုတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဆိုင်မှာရရှိနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ အစားအသောက်ပုံစံတူ အတုတွေကိုတွေမြင်တဲ့အခါ စားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီအစားအစာစျေးကွက်က အရမ်းကြီးမားလာတာပါ။ အခုဆို ဂျပန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှာတောင် ဒီစျေးကွက်က ၉၀ မီလီယမ် ဒေါ်လာလောက် တန်နေပါပြီ။ သူတို့ဆီမှာအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာအတုတွေကို ဝယ်လို့ရသလို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုလည်း သူတို့ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ...
သင်မထင်ထားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အရသာနဲ့ သရေစာ ၃ မျိုး In:Kawi Eats, Weird Food
သရေစာဆိုတာ ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ သင့်ပါးစပ်ထဲရောက်လာတဲ့ အစားအစာတစ်ခုလား? ဒါမှမဟုတ် အမြဲတမ်း သင့်ပါးစပ်ထဲထည့်ထားတဲ့ အစားအစာတစ်ခုလား? သရေစာဆိုတာ လူတွေနဲ့စိမ်းတဲ့အစားအစာမဟုတ်တဲ့အပြင် နေ့တိုင်းစားနေတဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အခုသင်တစ်ခါမှမကြားဖူးတဲ့ သရေစာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁. Wasabi Kit Kats Kit Kats ကို ဝေဖာပါတဲ့ ချောကလက်အဖြစ် အားလုံးသိကြပါတယ်။ Kit Kats မှာ အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်တစ်ခါမှမကြားဖူးတဲ့ Kit Kats အရသာတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ဝါဆာဘီ Kit Kats ပါ။ ဝါဆာဘီဆိုတော့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြေးမြင်မိမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီ Kit Kat က ဂျပန်နိုင်ငံမှာသာရတဲ့ Limited Addition Kit Kats ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆာဘီအရသာလေးကို ချောကလက်နဲ့ ဝေဖာနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လောက်တောင် စားကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်လိုက်တော့နော်။ ၂. Wasabi Donut ဝါဆာဘီဆိုတော့ နောက်ထပ်ဝါဆာဘီအရသာနဲ့ သရေစာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဝါဆာဘီ Donut ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ donut မဟုတ်ပါဘူး စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာရတဲ့ Donut ပါ။ Donut ဆိုတာ ချိုတဲ့အရသာဆိုပေမယ့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ ပြောင်းပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ Cheese Wasabi Donut ဆိုပြီး ဝါဆာဘီအရသာနဲ့ cheese အရသာနဲ့ ရောထားတဲ့ donut ကိုစားရမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး ရေညှိ Donut တောင်ရှိပါသေးတယ်တဲ့။ ၃. Cappuccino Pesi Pesi အအေးနဲ့ Coke ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲလို့မေးရင်တော့ Pesi ကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ Coke ကြိုက်တဲ့လူတွေ ရန်တွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Pesi ကတော့ ပိုပြီးတော့ အတွေးအခေါ်ကောင်းတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ Pesi က ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အရသာမျိုးစုံနဲ့ Pesi တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ထူးခြားတဲ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကတော့ Cappuccino အရသာနဲ့ Pesi ပါ။ ဒီ အရသာနဲ့ Pesi ကိုရုရှားမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ...
ခေါက်ဆွဲကို ဘီယာထဲထည့်စားရတဲ့ Beer Ramen In:Kawi Eats, Weird Food
Ramen ဆိုတာ ဂျပန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဖြစ်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာလည်း Ramen ဆိုင်တော်တော်များများရှိလာပါပြီ။ Ramen ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း တော်တော်များများရှိကြပါတယ်။ အခု Ramen ချစ်သူတွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ Ramen လေးအကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီ Ramen လေးနာမည်က Beer Ramen လို့ခေါ်ပါတယ်။ Canada နိုင်ငံက ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Beer Ramen ဆိုပေမယ့် အမှန်တော့တကယ့်ဘီယာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်ခေါက်ဆွဲ Ramen ကိုဘီယာလိုပြုလုပ်ထားတဲ့ alcohol မပါဝင်တဲ့ အရည်ထဲမှာထည့်စားတာပါ။ ထည့်စားတဲ့ခွက်ကလည်း ဘီယာစည်ခွက်ဖြစ်တာကြောင့် Beer Ramen ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီယာစည်ခွက်ထဲမှာ အရည်ရော ခေါက်ဆွဲရောထည့်စားရတာဆိုတော့ တကယ်ဘီယာသောက်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ Ramen ခေါက်ဆွဲစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Beer Ramen ကို ကြက်ကြော်နဲ့ဖြစ်စေ၊ အာလူးကြော်နဲ့ဖြစ်စေ၊ အသီးအရွက်ကြော်နဲ့ဖြစ်စေ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့ စားသောက်လို့ရပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးမှာ Beer Ramen မှမဟုတ်ပါဘူး အရမ်းစားလို့ကောင်းတဲ့ အခြား Ramen တွေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ...
ဒေါ်လာ သုံးသောင်း ($30000) ကျော်တန်တဲ့ ငါးဥ In:Food History, Kawi Eats, Weird Food
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ငါးသလောက်ဥဟင်းတစ်ပွဲကို ဘယ်လောက် ပေးရပါသလဲ? (၄) ထောင်၊ (၅) ထောင် လောက်တော့ အနည်းဆုံးပေးရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟင်းတစ်ပွဲကို (၄)၊ (၅) ထောင်ဆိုတာ စျေးကြီးတာပေါ့နော်။ ကြက်သား၊ ဝက်သား နဲ့စားရင်တောင် ထမင်းနှစ်နှပ်လောက် အေးဆေးစားလို့ရတယ်လေ။ သင်တို့ရော ဒီလိုမထင်မိဘူးလား? ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အခုပြောမယ့်အကြောင်းကို သိရင် အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်က ပုံထဲမှာပြထားတဲ့ caviar လို့ခေါ်တဲ့ ငါးဥလေးတစ်ဘူးက ဒေါ်လာ သုံးသောင်းခွဲ ($35000) ကျော်တန်ပါသတဲ့။ ဒေါ်လာ သုံးသောင်းခွဲ ($35000) ဆိုတာ မြန်မာငွေနဲ့ ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် သိန်း (၅၀၀) လောက်ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာငွေ သိန်း (၅၀၀) နော်!!! အဲဒါကိုရော စျေးကြီးတယ်လို့ မထင်ဘူးလား? ကားနှစ်စီးလောက်တောင် ဝယ်စီးလိုက်လို့ ရတယ်လေ။ နောက်ထပ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် ပိုတောင် အံ့သြသွားပါဦးမယ်။ ၁၉ ရာစုနှစ်တုန်းက ဒီလောက်စျေးကြီးတဲ့ ငါးဥကို ဝက်တွေကျွေးတာပါတဲ့။ အခုတော့ ဘယ်လောက်တောင် စျေးကြီးနေလဲ သွားသာကြည့်ပေတော့။ ဒါဆိုဘာလို့ caviar ဆိုတဲ့ ငါးဥက ဒီလောက်တောင် စျေးကြီးသွားတာလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကိုနေရာတိုင်းမှာ မရနိုင်လို့ပါ။ caviar ဆိုတာ sturgeon လို့ခေါ်တဲ့ ငါးတွေရဲ့ ဥပါ။ သူတို့ကအခုဆို အရမ်းကိုရှားပါးလာပါပြီ။ လူတွေရဲ့ ဖမ်းဆီမှုတွေများတာကြောင့် မျိုးတုန်းမှု အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ Sturgeon ငါးမတွေဟာ အနည်းဆုံး (၈) နှစ်လောက်ကြာမှ ငါးဥ ပျိုးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလောက် စျေးကြီးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆိုရင်ရော သိန်း (၅၀၀) အကုန်ခံပြီး caviar စားမလား? ငါးသလောက်ဥ ပဲ စားတော့မှာလား? ...
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ စားသောက်ဆိုင်တွေပေါ်က ဘဲအသည်းဟင်းလျာ In:Kawi Eats, Weird Food
ဘဲသားကို လူတိုင်းစားဖူးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဲအသည်းကိုတော့ လူတိုင်းစားဖူးကြလားဆိုတာကတော့ တွေးစရာဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီမှာတော့ ဘဲအသည်းကိုစားတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ်နဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘဲအသည်းကို စျေးကြီးအစားအစာ၊ ဇိမ်ခံအစားအစာ တစ်ခုအနေနဲ့ ဝယ်ယူစားသောက်ကြရပါတယ်။ ဒီအစားအစာကို သူတို့ဆီမှာ Foie Gras လို့ခေါ်ပါတယ်။ Foie Gras ဆိုတာ ဘဲ (သို့မဟုတ်) ဘဲငန်းရဲ့အသည်းပါ။ သူတို့က အရသာရှိပြီး အဆီအနှစ်တွေပြည့်ဝတဲ့ အသည်းရအောင်လို့ ဘဲတွေကို ပြောင်းဖူးပဲကျွေးပြီး မွေးမြူထားပါတယ်။ ဘဲတစ်ကောင်ကို တစ်နေ့အစာနှစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့ ၁၂ ရက်ခွဲလောက်ကျွေးပါတယ်။ ဘဲငန်းဆိုရင်တော့ တစ်နေ့အစာသုံးကြိမ်နှုန်းနဲ့ ၁ရ ရက်လောက်ကျွေးပါတယ်။ ဒီအစားအစာ Foie Gras က အီဂျစ်တွေကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ အီဂျစ်တွေက ငှက်တွေကို အဓိကအစားအစာအဖြစ် တော်တော်လေး လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်းကတော့ ဘဲအသည်းဟာ ဘုရင်တွေနဲ့ ဧကရာဇ်တွေပဲ စားရတဲ့ တန်ဖိုးကြီး အစားအသောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က Foie Gras ကို အာဏာ၊ ပိုက်ဆံ စတဲ့ ကောင်းခြင်းလက္ခာဏာတွေအနေနဲ့ ခံယူကြလို့ပါ။ သူရဲ့အရသာကို ပြောပြပါဆိုရင် ထောပတ်လို ချိုစိမ့်တဲ့ အရသာပြင်းပြင်းလေးနဲ့ နူးညံ့ပါတယ်။ ရိုးရိုးဘဲအသည်းတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ Foie Gras က ပြင်သစ်အစားအစာ၊ အချက်အပြုတ်နည်းတွေထဲမှာ ထူးခြားပြီး လူသိများတဲ့ ဟင်းလျာတစ်မျိုးအဖြစ်ရှိနေပြီး တကယ့်စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ စားသောက်ရတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ ...
ဂျပန်နိုင်ငံက အဆိပ်ရှိတဲ့ Fugu ငါးဟင်းလျာ In:Kawi Eats, Weird Food
အစားအစာ တစ်ခုက သင့်ကိုသေစေနိုင်တယ် ဆိုပါစို့! သင်စားဖြစ်မယ် ထင်ပါသလား? ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ အဆိပ်ရှိတဲ့ငါးကို စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ တကယ်ရောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ အဆိပ်မရှိတော့အောင် သေချာပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာမလုပ်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေဆိုရင် တကယ်သေသွားနိုင်တယ်လေ။ Fugu ငါးရဲ့အဆိပ်က tetrodotoxin လိုခေါ်တဲ့ အဆိပ်ပါ။ cyanite အဆိပ်ထက် အဆ (၁၀၀၀) လောက်ပိုပြီးတော့ ပြင်းပါတယ်။ ဒါကိုတောင် သူတို့ဆီမှာ အစိမ်းစားကြတာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဟိုးအရင်တုန်းက တစ်နှစ်ကို Fugu ငါးကြောင့် လူယောက် ၁၀၀ လောက်သေပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ တစ်နှစ်မှာ လူ (၃) ယောက်လောက်ပဲ သေနှုန်းရှိပါတော့တယ်။ သိပ်တော့ စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့လေ။ အမှန်တကယ်တော့ Fugu ကို လိုင်စင်ရ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာပဲ ရောင်းခွင့်ရှိတာပါ။ Fugu ငါးမှာရှိတဲ့ အဆိပ်တွေက အရေခွံနဲ့ ကလီစာတွေမှာပဲ ရှိတာကြောင့် ဒါတွေကို သေချာဖယ်ထုတ်ပြီးရင် စားသုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဂျပန်မှာ ကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်လို့ အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ Fugu ကိုစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန် ရောက်ရင် မြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုင်စင်ရထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တော့ ဖြစ်ပါစေနော်… ...
အကောင်ပေါက်နေတဲ့ ဘဲဥအချိုပွဲ (သို့) Balut In:Kawi Eats, Weird Food
Philippines နဲ့ Vietnam နိုင်ငံတွေမှာသာ အများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ Balut လို့ခေါ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုကို ကြားဖူးကြလားမသိဘူး။ ဒါက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အစားအသောက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို Balut ဆိုတာ ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးလဲ? Balut ဆိုတာ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဥထဲမှာအကောင်ဖြစ်နေတဲ့ ဘဲပေါက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥထဲက အကောင်တောင်မဖြစ်သေးတဲ့ ဘဲပေါက်လေးပါ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကြက်သီးတောင်ထတယ်ဟုတ်? Balut ဆိုတာ ဥထဲမှာအကောင်ဖြစ်နေတဲ့ ဥတွေကိုစားရတာပါ။ အစိမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး ပြုတ်စားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Balut ကို ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘဲဥတွေကို (၁၄) ရက်ကနေ (၂၁) ရက်လောက် နေပူထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သဲထဲမှာနှစ်ထားပြီး အပူပေးရပါတယ်။ သူတို့က အကောင်လေး အထဲမှာဖြစ်နေဖို့ဆိုရင် အရမ်းလည်းပူလို့မရသလို၊ အေးလို့လည်းမရပါဘူး။ ဒါမှ အထဲမှာဘဲပေါက်လေးတွေ ဖြစ်ထွန်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥလေးတွေကို Philippines နဲ့ Vietnam နိုင်ငံတွေရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လိုက်ရောင်းနေတာကို တွေ့နိုင်သလို ဆိုင်ကြီးတွေ၊ စျေးဝယ်စင်တာတွေမှာ ရောင်းချနေတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရောင်းတဲ့ ဥလေးတွေပေါ်မှာ နံပါတ်လေးတွေကို ရေးထားတတ်ပါတယ်။ (၁၄)၊ (၁၅)၊ (၁၈) စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီ နံပါတ်လေးတွေက သူတို့ရဲ့ ဘယ်လောက်အကောင်ဖြစ်နေပြီလဲ ဆိုလိုတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ နံပါတ်များလေ အကောင်ပိုပေါ်လေဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုဘယ်နှစ်ရက်ထားခဲ့လဲဆိုတာ ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့ရိုးရာအလိုက် စားတဲ့ပုံစံတော့ နည်းနည်းစီကွဲသွားကြပါတယ်။ Philippines မှာ များသောအားဖြင့် ရှာလကာရည်နဲ့ ဆားနဲ့ တို့စားလေ့ရှိပြီး Vietnam မှာတော့ အချိုပွဲအဖြစ် စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီး သင်ရော တစ်ခါလောက် Balut ကို မြည်းစမ်းချင်စိတ်မဖြစ်မိဘူးလား? ...